Wadarta Dagaal: Rome Reastered Remastered Date Release Lagu Shaaciyay | Waxaan ka socdaa mac
Wadarta Dagaal: Rome Reastered Remastered Taariikhda La Shaaciyay
Ragga ku jira Golaha Hal-abuurka waxay ugu dambeyntii ku dhawaaqeen taariikhda la sii deynayo dib u cusbooneysiinta Wadarta Dagaalkii: Rome, mid ka mid ah cinwaannada ugu caansan ee taxanahan. Waxa ku xigi doona 29 ee fabril, nooc ka soo muuqan doona xallinta 4K, ololeyaal cusub, 16 jabhadood oo cusub iyo waxyaabo kaloo badan.
Wadarta Dagaal: Rome waxaa la bilaabay 2004, 17 sano ka hor iyo ku dhawaaqista dib u cusbooneysiintan waxay cadeyneysaa oo keliya inaan haysano Wadarta Dagaal sanado badan oo dheeri ah. Dib u cusbooneysiinta waxaa ka mid ah Duulaankii Barbariyiinta iyo ballaadhintii Alexander.
Waxa intaa dheer in lagu daro labadaas ballaadhin, adeegsadayaasha waxay marin u heli doontaa ciyaartii asalka ahayd ee Rome: Wadarta Dagaalkii Uruurinta laga heli karo Steam, haa, kaliya isticmaaleyaasha Windows maaddaama cinwaankan aan loo sii deyn OS X, waa dhibaato si fudud loo xallin karo iyadoo la adeegsanayo Boot Camp, Parallels ama VMware Fusion iyada oo aan loo baahneyn in la aado kombuyuutar duug ah oo aan rukunka ka saarnay.
Sida laga soo xigtay ragga jooga Sega, marka lagu daro bixinta Loo habeeyay xallinta 4K, waxay sidoo kale ku dareen taageero loogu talagalay kormeerayaasha aadka u ballaaran iyo Aqoon isweydaarsiga Steam, markaa waxaan heli doonnaa hababka ay bulshada u abuurto.
Habka multiplayer wuxuu noo ogolaan doonaa inaan ku raaxeysano cinwaankan asxaabteena iyadoo aan loo eegin kombuyuutarkooda, tan iyo sidoo kale waxaa loo heli karaa Windows iyo Linux iyada oo loo marayo SteamOS.
Daahfurka iyo qiimaha
Ma noqon doonto ilaa 29ka Abriil ee soo socota, marka Wadarta Dagaalkii: Rome Remastered uu ku soo gaaro madasha Steam, halkaas oo aan horeyba uga sameyn karno iibsiga hore. The qiimaha waa 29,99 euro.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad horey u haysatay nooca aan loo baahnayn ee isla koontada Steam, illaa Maajo 31 waad awoodi kartaa ku hel noocyadan cusub qiimaha nuska ah. Haddii aadan haysan xisaab Steam ah, waxaad aadi kartaa bogga Feral-ka si koobigaaga ku keydi 29,99 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Wadarta Dagaal: Rome Reastered Remastered Taariikhda La Shaaciyay
Tracy Oliver waxay heshiis iskaashi la saxiixatay Apple TV + si loo abuuro taxane iyo filimaan